Madaxweynaha Mareykanka oo sheegay in ay wajaheayaan dhibaato dhaqaale tii ugu xumeed. | warsanradio baydhabo
Home WARARKA MAANTA	Madaxweynaha Mareykanka oo sheegay in ay wajaheayaan dhibaato dhaqaale tii ugu xumeed.
Madaxweynaha Mareykanka oo sheegay in ay wajaheayaan dhibaato dhaqaale tii ugu xumeed.
Madaxweynaha Mareykanka Joe Biden wuxuu saxiixay go’aanno fulineed oo wax looga qabanaayo dhaqaalaha sii xumanaya ee Mareykanka, si wax looga baddalo saameynta dhaqaale ee Corona virus uu ku keenay guud ahaan dhaqaalaha dalkaasi.
Biden ayaa yiri : “Mareykanka wuxuu wajahayaa dhibaato dhaqaale tii ugu xumeyd xilligan casriga ah, Waxaa jira muwaadiniin Mareykan ah oo aanan awoodin in ay quudiyaan carruurtooda, sidokale waaxa waxbarashada lumisay in ka badan 600 oo kun oo Arday taasi oo uu sababay xanuunka Corona Virus.”
Biden wuxuu carrabka ku adkeeyay in Qorshahan cusub ee samatabixinta Mareykanka looga gol leeyahay in 12 milyan oo muwaadiin ah loga saaro saboolnimada, sidokale waxuu sheegay in la qorsheeyay 2 trillion oo doolar oo wax looga qabanayo dhibaatooyinka ba’an ee uu wadanka ku keenay cudurka faafa ee Corona.
Waxaa xusid mudan in 12 milyan oo caruur ah hada aysan haysan cunno kufilan maadaama iskuuladu ay maalin walba cunno siin jireen ardayda qoysaska saboolka ah.
Qiyaastii 18 milyan oo Mareykan ah ayaa shaqo la’aan ah, taasi oo kor ugu kacday 6.7%.
Madaxweynaha Mareykanka oo sheegay in ay wajaheayaan dhibaato dhaqaale tii ugu xumeed. was last modified: January 23rd, 2021 by Admin
Faafaahin laga helaayo Dil Ka Dhacay Duleedka Magaalada Baydbabo
Wasaaradda arrimha dibadda Turkiga oo digniin u dirtay Midawga Yurub
Akhriso:-Khadiijo M. Diiriye “Dad ayaa dhahaya mooshinka kor ka soo bilaabeynaa, Madaxweynaha aadeynaa”
RW Kheyre & Guddoonka labada Aqal ee Baarlamaanka oo kusii jeeda Dhuusamareeb
Ra’iisul wasaaraha Lubnaan oo is casilay